Gold-East MS937 no klone iPhone 6 tsara indrindra amin'ny $ 115 | Vaovao IPhone
Cristina Torres sary placeholder | | fifaninanana
Tsy azo lavina fa manintona ny saina tsy ho an'ireo mpankafy marobe eran'izao tontolo izao ihany i Apple, fa amin'ireo mpamokatra hafa ihany koa. Na dia efa fantatra be aza ny raharaham-pifaninanana, ary nifarana mihoatra ny indray mandeha any amin'ny fitsarana noho ny fanandramana hanao plagiarism, mihamaro ny klona tsy manelingelina mandritra ny fotoana fohy hanafenana fa kopian'ny iPhone izy ireo. Fa eo amin'izy rehetra dia misy ny tsara sy ratsy tratra. Ary amin'ity tranga ity, heveriko fa noho ny fahitana azy tsara toa ny iPhone 6, dia tsy maintsy lazaintsika izay daty mety ho fanahafana azy tsara indrindra. Io ilay eo amin'ny sary ary antsoina izy io Gold-East MS937.
Fa amin'ny maha-klone tsara natao tany Sina azy, ny Gold-East MS937 dia tsy ny maniry ihany mirehareha amin'ny tena fitoviana amin'ny iPhone 6 an'ny Apple, nefa milaza ihany koa izy fa amidy amin'ny vidiny tena lafo. Na dia ao anatiny aza, noho ny toetra izay tsipihintsika etsy ambany, dia tsy misy na inona na inona momba ny atin'ny terminal, fa ny tena izy dia ireo izay nisafidy izany dia tsy afaka mangataka zavatra betsaka kokoa raha jerena ny 115 dolara vidiny ao amin'ny Tsena aziatika.
Ny endrika tsara vitan'ny iPhone 6 clone tsara indrindra hatreto dia toa tsy nanonitra na dia kely aza tao anatiny. Raha ny tena izy, ankoatry ny fon'ny Android fanta-daza sy mpanodina marika fotsy dia tsy misy afa-tsy 5 MP ny fakan-tsariny ary ny vahaolana amin'ny efijery izay mifanaraka amin'ny refin'ny iPhone 6 dia mahatratra 1280 x 720 teboka ihany. Mazava ho azy, raha tsy mijery akaiky ianao, ary tsy mahita ny ao anatiny, dia mety ho io no notifirin'ny iPhone 6. Ary angamba tsy famoronana ratsy amin'ireo fitsapana adala rehetra hitantsika tamin'ny horonan-tsarimihetsika izay manimba iPhones izay mitentina dolara vitsivitsy mihoatra ny vidiny Gold-East MS937.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Gold-East MS937 no klone iPhone 6 tsara indrindra amin'ny $ 115 fotsiny
Parallax Arthur dia hoy izy:
😭😭😭😭 they tsy fantatr'izy ireo intsony izay hatao android fako tsy mahomby
Mamaly an'i Parallax Arthur
Dany sequeira dia hoy izy:
Ary azonao ny valizy hitondra azy ao anatiny sa mila mividy azy misaraka?
Valiny tamin'i Dany Sequeira
Ny fanboy Apple dia toy ny fivavahana, mikatona fotsiny amin'ny finoany. Mbola voafandrika izy ireo amin'ny vanim-potoana "Tamagochi" ary mino fa manana XD tsara indrindra izy ireo.
Mamaly an'i vaderiq
Apple boy dia hoy izy:
Tsy misy ifandraisany ny Sinoa, ka mandondona ny iPhone 6. ambany na mid-range ny sinoa ary avo lenta ny iPhones.
Mamaly an'i Apple Boy
Rumani dia hoy izy:
Azo antoka fa tsy nanjary endrika ratsy toa ny finday iPhone io….
Valiny tamin'i Rumani
Laso dia hoy izy:
Ny zavatra mahatsikaiky indrindra amin'ny fanboys an'i Apple dia ny tsy fahafantaran'izy ireo fa ny singa ao amin'ny masinin'izy ireo kely avy any amin'ny paradisa dia vita any Chine, izay misy an'i Foxconn manana orinasa. Sa noheverinao fa avy amin'ny ampondran'i Dadatoa Sam izany?
Valiny tamin'i Laso
juanca dia hoy izy:
IPhone tany am-boalohany nividy tamin'ny 2007, ary miasa. Avelao ny mpanamboatra hafa, sinoa, japoney, indianina, sns, sns.
Laso, misy singa sy singa, ary mazava ho azy fa tsy hametaka ireo mitovy amin'ny iray amin'ny terminal hafa ireo Foxconn Sinoa.
Na ny fanboy na ny ronono, ny tena mahaliana ahy dia ny fividianana fantsona ary ao anatin'ny 7 taona miaraka amin'ny fanovana bateria dia miasa 100% ny faran'ny terminal miaraka amin'ny fetra lojika izay nilaza fa manana …… lojika. Amin'ny alahady dia manana ny iPhone 6 aho, hahahaha.
Mamaly an'i juanca
Tena tsara hahaha ary na iza na iza mieritreritra fa ny sinoa tsy avo lenta dia diso xiaomi dia naneho fa afaka manana ny haitao farany amin'ny vidiny mirary ianao ary koa ireo singa apelika na amboarin'ny zavatra sasany toa ny mpanamboatra azy. an'i Samsung ka tsy hitako izay itarainany hahaha
balento dia hoy izy:
Tokony hampahafantatra ny tenanao tsara kokoa ianao alohan'ny hiantohana fa io no klone mitovy indrindra amin'ny iPhone6. Topazo maso ny Dakele 3. http://www.dakele.com/index.html#2
Mahita azy ianao, mandinika azy io dia afaka manao lahatsoratra misy lanjany bebe kokoa.
Mamaly an'i balento